အချုပ်သားသယ်ဆောင်လာသော အချုပ်ကားလမ်းဘေးသစ်ပင်တိုက်ပြီး ရပ်တန့်သွားရာမှ နောက်မှဆိုင်ကယ်က ထပ်တိုက်မှုဖြစ်ပွား ~ Myanmar Online News
အချုပ်သားသယ်ဆောင်လာသော အချုပ်ကားလမ်းဘေးသစ်ပင်တိုက်ပြီး ရပ်တန့်သွားရာမှ နောက်မှဆိုင်ကယ်က ထပ်တိုက်မှုဖြစ်ပွား
4:54 AM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
ကျောက်ဆည်မြို့မှ မန္တလေးမြို့သို့ မောင်းနှင်လာသည့် အချုပ်ကားသည် ဒီဇင်ဘာလ (၃)ရက်နေ့ (၉)နာရီချိန်ခန့်တွင် ၂၆ ဘီလမ်း၊ ၆၅ လမ်းနှင့် ၆၆ လမ်းကြား အရောက်တွင် လမ်းဘေးသစ်ပင်ကို ဝင်တိုက်မိပြီး အချုပ် သား(၇)ဦး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်(၃)ဦးနှင့် ဆိုင်ကယ်မောင်းလာသည့် အမျိုးသမီး(၁)ဦး စုစုပေါင်း ၁၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
#မန္တလေး #အချုပ်ကား #သစ်ပင်တိုက် #ရပ်တန့် #ဆိုင်ကယ်ထပ်တိုက်
Tuesday, December3, 2019.
အချုပ်သား (၁၈) ဦးကို မန္တလေးအိုးဘို အကျဉ်းထောင်သို့ ပို့ဆောင်ရန် တင်ဆောင်လာစဉ် လမ်းဘေးသစ်ပင် ကိုတိုက်မိခဲ့ပြီး ကားရပ်တန့်သွားရာမှ ဘဏ်ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးတစ်ဦး မောင်းနှင်လာသောဆိုင်ကယ်သည် အချုပ်ကားအား ဝင်တိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ ယာဉ်နှင့်သစ်ပင် တိုက်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသူများကို ဆေးရုံပို့ဆောင်ထားကြောင်း သိရသည်။
ထိုယာဉ်တိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမှတ် (၁) ရဲစခန်းတွင် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်နေသည်ဟု သိရသည်။
▼ December (951)
ဟာသသရုပ်ဆောင် ၊လူရွှင်တော် ၊ ဒါရိုက်တာ ဦးခင်လှိုင်...
အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာ နိုင်းဝမ်းနဲ့ ယုန်လေးတို့ လိ...
၁၁ကြိမ်မြောက် Globe Soccer ချီးမြှင့်ပွဲမှာ ဆုတွေသ...
နတ္တလင်းမြို့ ကွေ့ကြီးကျေးရွာတွင် နာရေးချဖို့ လမ်း...
ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ဓာတုဗေဒကျောင်းသူတစ်ဦး ပျောက်ဆုံးန...
ကော့ခ်ဘဇားဒုက္ခသည်စခန်းတွင် စိတ်ကြွဆေးကုန်ကူးသူ ဒု...
အမြန်လမ်းတွင် ဘင်္ဂါလီအမျိုးသား ( ၄ )ဦးတင်ဆောင်လာသ...
နဝမအကြိမ် သက်ကြီးဂီတပညာရှင်ကြီးများအား ပူဇော်ကန်တေ...
Myanmar Idol Season4 Winner မိန်းကလေးရသွားတဲ့အတွက်...
တရုတ်လေတပ် အမှတ် ၁၂၁ တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်း 121st Ch...
"ဆံနွယ်ရှည်လေးများနဲ့ အလှတွေပိုနေတဲ့ အကယ်ဒမီ ယွန်း...
ပြိုင်ပွဲဝင် ဘဝကနေ လက်ရှိ ပရိသတ်အချစ်တော် နာမည်ကြီ...
တာဝန်များကို ပြန်လည်ထမ်းဆောင်နေပြီဖြစ်တဲ့ မန်းဝန်က...
Hacker တွေရဲ့ နှောက်ယှက်ခြင်းခံနေရတဲ့ မင်းသမီးချော...
ချစ်သူစုံတွဲများ၊ ပန်းချစ်တွေ သွားသင့်တဲ့ ပြင်ဦးလွ...
ပဲတီစိမ်း(ရွှေဝါ) အသစ်များ မန္တလေးဈေးကွက်သို့ ပေါ်...
Myanmar Idol ညစာစားပွဲမှာ Idol ပြိုင်ပွဲဝင်များနဲ့...
ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု ရင်ခွဲစစ်ဆေးတဲ့...
တက်သစ်စ မင်းသမီးချောလေး သဇင်ထူးမြင့် ရဲ့ ‌မွေးနေ့...
(၁၀)လအတွင်း အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က ...
Sunkist သောက်ရင်း လမ်းပျောက်နေသော Model Naw Phaw E...
ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဝေဖန်မှု အဖြစ်အပျက်တွေအပေါ် ရင်ဖွင့်...
ပထမအကြိမ် ဇွဲကပင်တောင်တက်ပြိုင်ပွဲကို ပြိုင်ပွဲဝင်...
၄၂ ကြိမ်မြောက် Mrs Universe 2019 တွင် မြန်မာနိုင်င...
သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ကြံစည်ခဲ့တဲ့ရာအိမ်မှုးကို အရေးယူပ...
မြင်းခြံထောင်အတွင်းမှာ အကျဉ်းသားများက ထောင်အာဏာပို...
ငပုတောတွင် ချောင်းဆိုပျောက်ဆေးနှင့် ပိုးသတ်ဆေးမှား...
သေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသည် ထိုင်းနိုင်ငံ လိပ်ကျွန်းလူသတ်...
မေမြို့မှာ ကိုယ်ပိုင် Cameraman လေးနဲ့ ပို့စ်အမျို...
အရင်ကထက် ပိုမိုပြီးလှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား ရရှ...
ကလေးဆန်ဆန်လေးနဲ့ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းနေတဲ့ ခြူးလေး
ပြည်မြို့နယ် ကြခတ်အုပ်စု ရွှေဝါမြေရွာတွင် ကလေးသူခိ...
အဝါရောင်လေးနဲ့ ပုရိသအကြိုက်ပုံရိပ်တွေကို ချပြလိုက်...
အိန္ဒိယရေတပ်အမှုထမ်းများ လူမှုကွန်ယက်မီဒီယာနှင့် စ...
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုရောက်ခဲ့စဉ်က ပုံလေးတွေကို အမှ...
ကားပျက်သဖြင့် ညအိပ်ရပ်နားနေစဉ် အမျိုးသား ၃ ဦး (စိစ...
လီလီပန်းလေးတွေနဲ့အပြိုင်လှပနေတဲ့ ခေးမေ ယွန်းဝတီလွင...
နေပြည်တော်- မန္တလေးလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၂၂၉/၆ အနီး...
မောင်က ဒီအတိုင်းပဲ ဆင်းလာခဲ့ဆိုလို့ ဒီအတိုင်ပဲ ဆင်...
အင်းတော်တွင် မုန်ယိုကာ သောင်းကျန်းနေသည့် ဆင်ကို ဖမ...
ငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာ အပျော်ကြီးပျော်နေကြတဲ့ အဆိုတော်...
ခေတ်မီသော စစ်တပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန် အစိုးရက ဆောင်ရွက...
တိမ်တွေ ပေါ်က နတ်သမီးလေးများလား လှပနေတဲ့ သရုပ်ဆောင...
နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူးအကြိုနေ့ ညကြီးပိုင်း ပြေးဆွဲနေ...
မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌအဖြစ် ဝင်ရောက်...
အိန္ဒိယတွင် ကြက်သွန်နီတင် ကုန်တင်ကား ပြန်ပေးဆွဲခံရ
တိမ်တွေရှိသောအရပ်ဆီကိုအတူတူ သွားချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မတ...
လားရှိုးမြို့၊ ကြာကန် ဘာသာပေါင်းစုံသုသာန်အတွင်းရှိ...
ရေးမြို့ မီးစက်ရုံမီးလောင်မှု လာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ပြ...
Dancing With The Star ပြိုင်ပွဲတွင် ပြိုင်ပွဲဝင် ဟ...
မြင်းခြံထောင် အကျဉ်းသားတွေ ဆန္ဒပြ
မိုင်းဆတ်မြို့တွင် သိန်း ၅၀၀၀ နီးပါး တန်ဖိုးရှိ စိ...
ပန်းကလေးတွေတောင် ဦးညွှတ်အလေးပြုရလောက်အောင် လှပနေတဲ...
အငြိုးနဲ့များ ကြည့်နေရတာလားမိုးရယ်😘 အကြည့်တွေနဲ့တ...
မချစ်တတ်တဲ့သူ ဖြစ်မှာပဲ ကြောက်တာလို့ဆိုလာတဲ့ မော်ဒ...
နာဆာက အင်္ဂါဂြိုဟ်ကို လွှတ်တင်မယ့် မားရဟတ်ယာဉ် ပရေ...
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နှစ်သစ်ကာလတွင် အရက် - မူးယစ်ဆေး သ...
TNLA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့၏ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက...
အရာတော်မြို့နယ်၌ ကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီမှ ၎င်းတိ...
ကြွေသွားလောက်တဲ့အကြည့်တွေ၊ အပြုံးလေးနဲ့ ချစ်စကောင်...
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါလို့ အပြုံးချိုချိုလေးတွေနဲ့ နှု...
"လင်း"ကွန်ပျူတာမှ လှူဒါန်းသော နာရီစင်အား နေပြည်တော...
နှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရက်အတွင်း ချင်းမိုင်၏ ကမ္ဘာလှည့်ခရ...
မင်းပြားမြို့နယ် ၊ ရာမောင်ကြိုးတံတားအား AA အကြမ်းဖ...
ရုရှားနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူထားသည့် ဗီယက်နမ်ရေတပ်၏ ကီလို ...
တာမွေ (ယာယီစျေး)အတွင်း ဈေးရောင်းခွင့်မပြုတော့သည့် ...
ဂူတာပြင်ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ စစ်တရားရုံးဖြင့် ရုံးထ...
နှစ်သစ်ကူးကာလ ၇ ရက် အတွင်း တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ဘန်ကောက်မ...
ကုတင်ပေါ်ကအကြောင်းတွေပဲ ရေးသားတဲ့သူလို့ လူသိများလာ...
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ် ဘုရားကျောင်း ...
အနက်ရောင်ဖက်ရှင်နဲ့ လမ်းမကြီးထက်မှာ မမှတ်မိနိုင်အေ...
ဆုပန်ထွာနဲ့ သားလေး Roar လေးတို့နဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ...
နန်းဆန်နေတဲ့ အလှတရားများနဲ့ မတ်မတ် ယုသန္တာတင် 💓💓...
အေးမြဖြူကို အားပေးစကားတွေ အများကြီး ပြောခဲ့တဲ့ နေမင်း
အက်စတာကို winner ပေးမယ့်အစီအစဉ်ရှိထားပေမယ့် ဝေကြီး...
နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္...
မိခင်ကို ငွေကျပ် သိန်း ၃၀ နဲ့ကန်တော့ခဲ့တဲ့ မွေးနေ့...
စိတ်ချရမယ့် သူကိုဘဲ ချစ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဆုလှိုင်ဝင်း
Idol အမျိုးသမီး winner ရရှိသွားလို့ ပိုးမီကို လောင...
မိုင်းဆတ်မြို့နယ်၌ ထိုင်းနိုင်ငံသားတစ်ဦးထံမှ သိန်း...
ပထမဦးဆုံး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ မိန်းကလေး Winner ကြောင့် ပ...
Winner ဆုမရရှိခဲ့ပေမယ့် ပရိသတ်တွေပေးတဲ့ Winner ဆုရ...
တောင်ပေါ်သူလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ အင်းလေးရောက် အပျိုကြီ...
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဖုန်းအလုံး ၁၀၀ ကျော်နှင့်အတူ တရု...
မြန်မာ့သမိုင်းဝင် တော်လှန်ရေးပန်းခြံကို ဝင်ကြေးအခမ...
AA အဖွဲ့၏ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဒေသခံပြည်သူမျ...
မဟုတ္တာႀကီး ၂၀၅၀ အထိမၾကာပါ
မြန်မာဆန်ဆန်လေးနဲ့ အရမ်းလှနေတဲ့ မမ ခိုင်နှင်းဝေကို...
Dr. အေးဇော်ထွန်းနှင့် သား စသုတမွန် တို့အား ရည်စူး၍...
ပဲခူးမြို့တွင် လူသတ်မှုကျုးလွန်းခဲ့သည့် တရားခံအား ...